मन्त्रालय यसरी ‘सुसाइड स्पट’ बनेपछि …. « Npnews
मन्त्रालय यसरी ‘सुसाइड स्पट’ बनेपछि ….
प्रकाशित मिति: February 23, 2018
महाराष्ट्र सरकारको मुख्यालय यानि मन्त्रालय, हाल मानिसहरुका लागि ‘सुसाइड स्पट’ बन्दै गईरहेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा आठ व्यक्तिले सरकारी कार्यालयहरूमा समयमा काम सुनुवाई नभएपछि हतास भएर मन्त्रालय परिसरमा नै आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिसकेका छन्। गत शुक्रबार पनि एक महिलाले भवन सामुन्ने विष पिएर आत्महत्याको प्रयास गरिन। नजिकै हिडिरहेको एक व्यक्तिको नजर उक्त महिलामा परेपछि उनले तुरुन्तै नजिकैको सेन्ट जर्ज अस्पतालमा लगे।
विगतसहित अहिले सम्ममा आत्महत्याको प्रयासमा यो आठौँ मामिला हो। एक महिलाले मन्त्रालयको भवन सामुन्ने नै विष पिएर आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेकी छिन् । यो भन्दा पहिले एक युवकले मन्त्रालयको पाँचौं तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए। उक्त युवकको खल्तीमा प्रहरीले एउटा नोट फेला पारेका थिए जसमा उनले लेखेका थिए कि उनी गृह विभागको अधिकारीलाई भेट्न मन्त्रालय आएका थिए र आफ्नो काम सुनुवाई नभएपछि आफूले यस्तो कदम उठाएको जनाएका थिए। ६० वर्षीय महिलाले विष पिएर कथित रुपमा आत्महत्या गर्ने प्रयासको मामिला बारे पुलिसले मिडियासँग उक्त महिलाको परिवारमा चलेको सम्पति विवादको कारण यस्तो कदम उठाउन विवश भएको हुन् सक्ने आँकलन गरे।
प्रहरी अधिकारीले भने कि भारतको पश्चिमस्थित महाराष्ट्र राज्यको प्राचीन सहर नासिक निवासी सखूबाई झाले शुक्रबार मध्याहनमा दक्षिण मुम्बईको नरिमान पोइन्ट ईलाकामा रहेको विधान सभा भवन निकट सडकमा आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेका थिए। एक बटुवाले महिलालाई तुरुन्तै अस्पतालमा पुर्याए। डाक्टरका अनुसार महिलाको स्वास्थ्य अवस्था स्थीर छ र प्रहरी अधिकारीहरु महिलाले यस्तो कदम उठाउनुको कारण जान्ने कोसिस गरिराखेका छन्।
मन्त्रालयमा आत्महत्या गर्ने या आत्महत्याको कोसिस गर्ने यो आठौँ घटना हो। गत ८ फेब्रुअरी बिहिबारको दिन पैठणको खुल्ला जेलबाट जमानतमा छुटेका एक कैदी हर्षल रावतेले मन्त्रालयको पाँचौ तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे। यो भन्दा पहिले २२ जनवरीमा ८४ वर्षीय धर्मा पाटील नाम गरेका वृद्द किसानले कीटनाशक औषधीको सेवन गरी आत्महत्या गरे। पछि अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। गत ७ फेब्रुअरीमा पनि मन्त्रालयको प्रवेशद्वार बाहिर एक युवकले मट्टितेल शरीर भरि खन्याएर आफुलाई जलाउने कोसिस गरेका थिए।
राज्य सरकारले मानिसहरुलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न मन्त्रालयको भवनमा नाईलनको जाल लगाएका छन्। तथापि मन्त्रालयका यस्ता प्रयासहरूको बाबजुद पनि आत्महत्या रोकिने छाँटकाट देखिएको छैन। एजेन्सीको सहयोगमा